ထူးမြတ်သောသွေးလှူခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Tank » ထူးမြတ်သောသွေးလှူခြင်း	10
Posted by aye.kk on Jan 12, 2012 in Think Tank | 10 comments
သူတပါးကို ကောင်းမွန်ချမ်းသာစေလိုသော မေတ္တာစိတ် စေတနာ ကို အရင်းခံ၍ မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းဝတ္ထုကို ပေးကမ်းစွန့်လှူ ခြင်းကို ဒါနဟုခေါ်ပါသည်။ ဒါနသည် လောဘ၊ မစ္ဆရိယတရား ဆိုးတို့ကို တော်လှန်နိုင်ခြင်း၏ အောင်ပွဲဖြစ်သည်။ ဒါနသည် ဘ၀ ခရီးလမ်းကြောင်း သံသရာရိက္ခာအတွက် စုဆောင်း ပျိုးထောင် သည့် စရိတ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းသောအကြောင်းကံသည် အခါအခွင့်သင့်ချိန်မှာ ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုသာ ပေးမြဲ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုချမ်းသာပြည့်စုံနေကြသူများသည် ယခင်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြသော ဒါနကုသိုလ်ကံများ၏ အကျိုးဆက်ကို ခံစား နေကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားအလောင်း တော် စသော သူတော်ကောင်းများသည် ဒါနပါရမီကို အရင်းခံ၍ အခြားပါရမီ တို့ကိုလည်း ဖြည့်ကျင့်မြဲ ဖြစ်သည်။
လှူဒါန်းရာတွင် သူတစ်ပါး (သို့) အများ အတွက် အသုံးဝင်မည့်ပစ္စည်း၊ အကျိုးများမည့် ပစ္စည်း များကိုသာ အစဉ်အလာအားဖြင့် လှူဖြစ်ကြပါသည်။ ယခုခေတ်တွင် အနောက်တိုင်းဆေးပညာ အကျိုး
ပြုမှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးအတွက် အလှူဒါနနယ်ခွင်မှာ ကျယ်ဝန်းလာပါ သည်။ ရှေးကဆိုလျှင် လူတစ်ဦး သည် မိမိ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းကို တစ်ပါးသူအား စွန့်လှူလိုသည့် စေတနာ ပင်ဖြစ်စေကာမူ ယင်းအလှူ ကို ထမြောက်အောင် စွမ်း ဆောင်ပေးမည့် ကုသရေးဆိုင်ရာများ ရှားပါးခဲ့ပါသည်။ ယခုခေတ် တွင်မူ စေတနာ ထက်သန်သူတို့သည် မိမိ၏ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ် အပိုင်းတို့ကိုပင် အန္တရာယ်ကင်းပြီး အကျိုး ရှိစွာဖြင့် ဒါနဥပပါရမီ မြောက်အောင် လှူဒါန်းနိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါ သည်။ မျက်မှောက်ခေတ် တွင် သွေးအလှူ,သွေးရည်ကြည် အလှူ, မျက်ကြည်လွှာအလှူ, ကျောက်ကပ်အလှူ, နှလုံး အလှူ စသည်များသည် နေ့စဉ် လုပ်ငန်းသဖွယ်ပင် ဖြစ်နေပါပြီ။
၁။ အလှူရှင်များသည် မိမိတို့၏ လှူခဲလှစွာသော ဥပပါရမီ မြောက်သည့်အလှူတို့၏ မွန်မြတ်လှသည့်အဖြစ်ကို သိရှိပြီး ၀မ်းမြောက်ကြစေရန်၊ ၂။ အလှူရှင်များသည် လှူဒါန်းရာတွင် သာလွန်၍မြတ်သော အလှူဖြစ်မြောက်စေရန် ပြင်ဆင်နိုင်ကြောင်းကို သိရှိစေရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဤအချက်တို့ကိုဖေါ်ပြရာတွင် သွေးလှူခြင်းကို အခြေ ပြု၍ တင်ပြထားသော်လည်း အခြားသော အလှူများ အတွက်လည်း ဉာဏ်ယှဉ်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
သွေးလှူရှင်တိုင်းတွင် ဖြစ်ထွန်းထမြောက်သော ဒါနအစု အလှူအမျိုးများကိုသိရှိရ၍ ၀မ်းမြောက် ကြစေလို ပါသည်။
သွေးလှူရှင်သည် သွေးလှူမည်ဟု အစပျိုး၍ ရည်ရွယ် ခြင်းသည်ပင်လျှင် စေတနာဒါန ဖြစ်မြောက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်လှူဖြစ်လျှင် ၀တ္ထုဒါန ဖြစ်သော အာမိသဒါန ဖြစ်ပြန် သည်။ မိမိ အသက်ရှိစဉ်မှာပင် လှူရ သဖြင့် သဇီဝဒါန ဖြစ်သည့် အပြင်၊ မိမိမျက်မှောက်၌ လှူရ သော ပစ္စက္ခဒါန နှင့် မိမိကိုယ်တိုင် လှူရသော သာဟတ္ထိက ဒါန တို့လည်း မြောက်ပြန်ပါသည်။ မိမိ ကိုယ်၏ အစိတ် အပိုင်းဖြစ်သော အသက် သွေးကိုလှူရသော ဤ အဇ္ဈတ္တိက ဒါနသည် မကျန်းမာ သူတစ်ဦးအတွက် မိမိအလှူဖြင့် ချီးမြှောက် ထောက်ပံ့ သော အနုဂ္ဂဟဒါန အဖြစ်ဖြင့်၎င်း၊ လူမမာ ၏ အသက်ချမ်းသာခြင်း ဘေးကင်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသော ဇီဝိတ ဒါန ၊ အဘယဒါန အဖြစ်ဖြင့်၎င်း မလွဲ ဧကန်ထင်ရှားလှပါသည်။ ဤကဲ့သို့မေတ္တာယှဉ်၍ အလှူခံဖြစ်သော လူမမာ၏
အကျိုးကိုလိုလားလျက်လှူရသော ဤဒါနသည် အပြစ် ကင်းသော အန၀ဇ္ဇဒါနမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမြတ်သည့် လှူဖွယ်တို့တွင် တန်ဖိုးရှိလှသော ဤအသက်သွေးကို ပေးလှူခြင်းသည် မွန်မြတ် လှသော ပဏီတဒါန အမှန် မြောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သွေးလှူ ခြင်းသည်တရားနှင့် လျော်စွာ ပေးလှူထိုက်, ပေးလှူအပ်လှသော ဒါနမျိုး ဖြစ် ပါသည်။
လှူရန်ဝတ္ထု , အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်
အလှူတစ်ခုထမြောက်ရန် (၁) အလှူရှင်၊ (၂) လှူလို သောစေတနာ၊ (၃) လှူရန်ဝတ္ထု၊ (၄) အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ ပြည့်စုံကြ ရပါသည်။ သွေးဟူသော လှူရန်ဝတ္ထု (လှူ ဖွယ်)သည်အလှူခံသူ လူမမာအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်လှသော၊ လှူသင့် လှူထိုက်လှသော၊ သန့်ရှင်းသော လှူဖွယ်ပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်။ သဘောထားကြီးစွာဖြင့် မိမိ ကိုယ်တွင်းမှ ထုတ်ယူပေးလှူသော အသက်သွေးသည် မွန်မြတ်လှသော လှူဖွယ်ပစ္စည်းလည်း ဖြစ်ပါ သည်။ လူမမာဖက်မှ သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဤသွေးသည် မိမိ အတွက် အသက် ရှည်ခြင်း ဆုလာဘ်ကြီး တစ်ခုပင် ဖြစ်နေသည့် အပြင် မိမိနှင့် အသင့်လျော်ဆုံးသော အသက်ကယ် အာဟာရ အားဆေးကြီးဟူ၍လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ မိမိ၏ ကျန်းမာရေး အတွက် အသက်သွေးကိုပင် ဖောက်၍လှူသူ ရှိပေသည်ဟူ၍ ၀မ်းမြောက် အားတက်ဖွယ် စိတ်ဓါတ်အားဆေးဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါ သည်။ လှူဒါန်မည့် သွေးကို ရှာဖွေမရ၍့ ဖြစ်ပေါ်ရမည့် စိတ်ဆင်း ရဲခြင်းကိုလည်း လွန် မြောက် စေပါသည်။ သွေးအလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ် များတွင် အလှူရှင်က သိခွင့်ရ သော လူမမာများရှိသလို သိခွင့် မရလိုက်သူများလည်း ရှိပါ မည်။ သွေးဘဏ်များတွင် သွေးလှူ ပါက မိမိ၏သွေးသည် မည်သည့်ဆေးရုံတွင် မည်သည့် လူမမာ အား ပေးလှူရမည် ကိုပင် မမှန်းဆနိုင်ပါ။ အလှူခံအပေါ် ပုဂ္ဂိုလ် စွဲ ပယ်ဖျောက် ၍ အသုံးလိုသူ အတွက်သာဟု သဘောထား နိုင်လျှင် စေတနာ ပို၍ပင် သန့်စင်နိုင်ပါမည်။ မိမိ လှူလိုက်ရ သည့် သွေးဖြင့် အသက်ဘေးမှကင်းစေခြင်း၊ ရောဂါသက်သာ ပျောက်ကင်းစေခြင်း၊ ကျန်းမာလန်းဆန်းစေခြင်းစသော မွန်မြတ် သော ရည်ရွယ်ချက်တို့ကိုသာဦးတည်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကို ပယ်ဖျောက် နိုင်ပါသည်။ လှူလိုစိတ်ကြောင့်ပင် မိမိ၏ သွေး(လှူဖွယ်ပစ္စည်း) ကို လောဘဖြင့် စွဲလမ်းတွန့်တိုခြင်း မစ္ဆရိယအကုသိုလ် ကင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
သွေးလှူခြင်းသည် မေတ္တာ, ကရုဏာ ကုသိုလ်ဓါတ် တို့ကို ကာယကံမြောက် ပွားများလိုသူတို့ အတွက် လက်တွေ့ ဖြည့်ကျင့်ရမည့် ဒါနဥပပါရမီကျင့်စဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ အမြတ်ဆုံးအလှူ ဖြစ်မြောက် ရန်အတွက် အလှူရှင်သည် မှန်ကန်သောအသိ ဥာဏ်အမြင်ယှဉ်လျက် မိမိ၏စိတ်ကို ကောင်းစွာ ပြင်ဆင် ရပါမည်။ အလှူရှင်က သီလသန့်စင်နေပြီး မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်စေတနာ ကောင်းဖြင့် ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာစွာ ပေးလှူပါလျှင် မြတ်သောအလှူ ဧကန်ဖြစ်ပါသည်။
်ကံ+ကံ၏အကျိုးကို သိမြင်ယုံကြည်သောဉာဏ် ဖြင့် ပြုသောကြောင့် ဖြစ်လေရာဘ၀တွင် တိဟိတ် ပဋိသန္ဓေအကျိုး ကို ပေးသဖြင့် ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူ (၀ါ) တရားထူးရနိုင်သူ ဖြစ်ရသည်။ (ဒါနကောင်းမှု) ကံကြောင့် အကြောင်းအားလျော် သော အကျိုး (ကောင်းကျိုး)က ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ဖို့ လိုပါသည်။ ဤသို့ယုံကြည် ခြင်းသည် စစ်မှန်သောသဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပါသည် ။ သဒ္ဓါရှိသူ ၏ကံသည် ပို၍ထက်မြက်ပါသည်။
အလှူခြင်းတူသော်လည်း အသိ,ခံယူချက်,ယုံကြည်ချက် ဉာဏ်နှင့် စိတ်ထားတို့အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ဒါနအမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြရပါသည်။ ၁။ကံ+ကံ၏အကျိုးတို့ကို သိမြင်ယုံကြည်၍လှူလျှင် ဉာဏ သမ္ပယုတ္တဒါန၊ ကံ+ကံ၏အကျိုးတို့ကိုမသိမြင်မယုံကြည်ဘဲလှူလျှင် ဉာဏ ၀ိပ္ပယုတ္တဒါန၊
၂။ ၀ဋ်ဆင်းရဲကင်းရာ နိဗ္ဗာန်ကိုတောင့်တ၍လှူလျှင် ၀ိဝဋ္ဋ နိဿိတဒါန၊၀ဋ်ဆင်းရဲမကင်းသော လူနတ်ဗြဟ္မာ ချမ်းသာ တို့ကို တောင့်တ ၍လှူလျှင် ၀ဋ္ဋနိဿိတဒါန၊
၃။ လောကုတ္တရာမဂ်ဖိုလ်ကို ရည်ရွယ်၍လှူလျှင် ဘုဇိဿ ဒါန၊လောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာကို တောင့်တ၍လှူလျှင် ဒါသဒါန၊
၄။ တဏှာ ဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မသုံးသပ်ဘဲလှူလျှင် အပရာမဋ္ဌဒါန၊
၅။ တစ်ဦးတစ်ယောက်က မတိုက်တွန်းဘဲ မိမိ၏ စေတနာ
ရင်းဖြင့်လှုလျှင် အသင်္ခါရိကဒါန၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်က တိုက်တွန်း၍လှူလျှင် သသင်္ခါရိကဒါန၊
၆။ စိတ်ရွှင်ကြည်နူးစွာလှူရလျှင်သောမနဿဒါန၊ ၀မ်းသာဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဘဲလှူရလျှင် ဥပေက္ခာဒါန၊ စသည်ဖြင့် ဒါနကံအမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြသဖြင့် အကျိုးအမျိုး မျိုးလည်း ကွဲပြားကြရသည်။
သွေးမလှူမီ အချိန်ရလျှင် ငါးပါးသီလကို ဆောက် တည်သင့်ပါသည်။ အချိန်မရလျှင် “တပည့်တော်သည်သရဏဂုံ သုံးပါးနှင့်တကွ ငါးပါးသီလကို ဆောက်တည် ပါ၏ “ဟု စိတ်ဖြင့်၎င်း နှုတ်ဖြင့်၎င်း ဆောက်တည်နိုင် ပါသည်။ သီလ တည်သူ ၏အလှူသည် အကျိုးကြီးမားသည့်အပြင် သီလကြောင့် ယခုဘ၀ နောင်ဘ၀များတွင် အသက်ရှည် ခြင်း ကျန်းမာခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ပြည့်စုံ နိုင်ကြပါသည်။
မိမိဒါနကိုအကြောင်းပြု၍ သီလဆောက်တည်ပြီး နောက် ဘာဝနာကုသိုလ်ပါ တိုးပွားပါက ပို၍ ထူးမြတ်လာ ပါမည်။ သွေးမလှူမီနှင့် လှူဆဲတွင် သတ္တ၀ါများအား မေတ္တာပို့သင့်ပါသည်။ သွေးအလှူခံသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို သိနေ ပါက ထိုသူအားလည်း မေတ္တာပို့လွှတ်နေနိုင်ပါသည်။ မေတ္တာ ကရုဏာဓါတ်၏သတ္တိဖြင့် မိမိလှူသောသွေး၏ သြဇာအာနိသင် ထက်မြက်နိုင်သည့်အပြင် လူမမာတွင် လည်း ၄င်းမေတ္တာစွမ်းအား ကြောင့် ဘေးရန်ကင်း၍ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာခြင်းတို့အတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ မိမိတွင် လည်း မေတ္တာစိတ်ဖြင့် မြင့်မြတ်စွာ နေရသည် ဖြစ်၍
ကုသိုလ်တရားတိုးပွာရပါသည်။ မေတ္တာ, ကရုဏာ တရား တို့က ရက်ရောစွာလှူသည့် စိတ်စေတနာ သဒ္ဓါတရားကို အားပေးပြန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သွေးလှူရှင် တိုင်းသည် အချိန်ယူ၍ မေတ္တာပွား သင့်ပါသည်။
စေတနာဟူသည် ကံတရားပင် ဖြစ်ပါသည်။ သွေးလှူ ရှင်သည် မေတ္တာ ကရုဏာဦးစီးသော စေတနာ၏ စေ့ဆော်ချက် ဖြင့် မိမိသွေးလှူရတော့မည်၊ အသက်ကယ်ရ တော့မည်၊ လူသား တစ်ဦး၏ ရောဂါ ကို သက်သာ ပျောက် ကင်းစေရတော့မည်ကို မလှူမီကပင် ၀မ်းမြောက်နေသော ပုဗ္ဗစေတနာ တို့ကို များစွာ ဖြစ်သင့်ပါသည်။ မိမိ၏ မွန်မြတ် သောအလှူအတွက် သွေးလှူ နေစဉ်တွင် ၀မ်းမြောက်နေ သော မုဉ္စစေတနာ များကို များများ ဖြစ်စေသင့်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင် မေတ္တာ, ကရုဏာ, ရက်ရော စွာ ပေးလှူချင် သော ဆန္ဒမွန်တို့ အပြန်ပြန်အထပ်ထပ် ကျေးဇူး ပြုကြပြီး ကုသိုလ်များစွာ တိုးပွားရပါသည်။ မွန်မြတ်လှသော သွေး အလှူ ထမြောက်အောင်မြင်သောအခါ အားရ၀မ်းမြောက် နေသော အပရစေတနာကို ကြိမ်ဖန်များစွာ အောက်မေ့ရပါမည်။ အပရစေတနာပွားတိုင်းအမှန်တကယ်လှူနေရသကဲ့သို့ပင် ကုသိုလ်များ တိုးပွား သည့် စာဂါနုဿတိ တစ်မျိုး ဖြစ်ပြန်ပါသည်။ပုဗ္ဗစေတနာကြောင့် ပထမအရွယ်တွင် ကြီးပွား ချမ်းသာ ခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကို ကောင်းစွာ ရှာဖွေ နိုင်ခြင်း အကျိုးကို ဖြစ် ထွန်းစေသည်။ မုဉ္စစေတနာကြောင့် ဒုတိယ အရွယ်၌ ချမ်းသာ ခြင်း၊ ရှာဖွေရထား သော ပစ္စည်းများကို စုဆောင်းမိခြင်းအကျိုးကို ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အပရ စေတနာကြောင့် တတိယ အရွယ်၌ ချမ်းသာရခြင်း၊ မိမိ၏ ပစ္စည်းများကို ကောင်းစွာ သုံးစွဲခံစားရခြင်း အကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင် သည်။ လှူသည့်အခါတွင် အလှူ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စေတနာ သုံးတန် ဖြစ်နေရပါမည်။
(လှူပြီးလျှင် ၀ိပဿနာပွားလိုက ပွားနိုင်ပါသည်။ လှူနေစဉ်မှာ ရုပ်နာမ်သဘောကို ဆင်ခြင်နေလျှင် သဘာဝမကျပါ။ လှူနေစဉ် မှာ ၀မ်းမြောက် ကြည်နူးနေခြင်း ဒါနကိစ္စသာ ဖြစ်သင့်ပါသည်)
ဆုတောင်းခြင်းသည်မိမိ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုဦးတည်ချိန်ရွယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆုတောင်း ကို ကံ၊ပါရမီလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ်၍ ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမည်။ ကောင်းမှု များ ပြုလုပ်ပြီးတိုင်းလည်း မိမိ၏ ရည်ရွယ်မြော်မှန်းချက် ခိုင်မာစေရန် ထပ်မံ၍ ဦးတည် ဆုတောင်း ပေးရပြန် သည်။ လူတို့သည် မိမိတို့၏တောင့်တချက်၊ အသိဉာဏ်၊ ဗဟုသုတ အလျောက် မိမိတို့ အလိုရှိရာကို ဆုတောင်းလေ့ ရှိကြပါ သည်။ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကံတို့သည် အကျိုးပေး အလှည့်အားလျော်စွာ သံသရာ တစ်လျှောက်လုံးမှာလိုက်၍ အကျိုးပေးကြပါသည်။ သွေးလှူသည့် ကုသိုလ်ကံသည် သံသရာဘ၀များစွာ အတွက် ရိက္ခာကောင်း ဧကန်အမှန် ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သမ္မာဒိဋ္ဌိ အယူရှိသူတို့သည် အမြတ်ဆုံး ပန်းတိုင်ဖြစ်သော ဒုက္ခငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်တရား မြတ်ကို လိုလားတောင့်တ စိတ်ညွတ်၍ တောင်းဆု ပြုနိုင် ကြပါသည်။ နိဗ္ဗာန် ဗောဓိဉာဏ်ကို တောင့်တ၍ ကုသိုလ် ပြုလျှင် ပါရမီမြောက်ပါသည်။ ၄င်းကြောင့် တစ်ချိန်တွင် နိဗ္ဗာန်ကို ရစေကြောင်း အကျင့်မှန် သတိပဋ္ဌာန်ကို ကြိုးစား ပွားများ၍ အရိယာအဖြစ်ကို ရရှိနိုင်ပါမည်။ ဤသို့ လောကုတ္တရာ နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကို ဆုပန်သော်လည်း အကြောင်းအားလျော်သော လောကီ ချမ်းသာများကိုလည်းရရှိစေနိုင်သည်သာ။ မိမိလိုရာ လောကီချမ်းသာကိုလည်း ဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။ အပြစ်မရှိပါ။
သွေးအလှူရှင်သည် မွန်မြတ်လှသော အလှူဖြင့် မိမိ ဆည်းပူးရမိသော ကုသိုလ်များစွာတို့ကို မိဘနှစ်ပါး အစ ထား၍ အခြားသူ, ပုဂ္ဂိုလ်အနန္တတို့အားလည်း မိမိနှင့်ထပ်တူ ထပ်မျှ ကုသိုလ်များရရှိစေရန် ဝေမျှ သင့် ပါသည်။ သွေး ဒါနကြောင့် ဖြစ်သောကုသိုလ်ကို ထပ်ဆင့်၍ ပေးလှူဒါန ပြုခြင်း (၀ါ) အမျှဝေခြင်း ပတ္တိဒါနကြောင့် ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်သူတို့က ကောင်းမှုအကျိုးကို ရရှိနိုင် ကြပါသည်။ မိမိ၌လည်း ကုသိုလ် ထပ်ဆင့်၍ တိုးပွားရပြန်သည်။ သံသရာရိက္ခာအဖြစ် ကုသိုလ် များများ စုဆောင်းနိုင်ကြ ပါစေ။
သွေးလှူရှင်တို့သည် ဒါနဥပပါရမီမြောက်အောင် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။ ရှေးဦးစွာ မိမိတွင် ကံ၊ ကံ၏အကျိုး ကို ယုံကြည်သော ဉာဏ်(သဒ္ဓါတရား)နှင့်ယှဉ်၍ သီလကို ဆောက်တည် ပြီးလျှင် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ ဗောဓိဉာဏ်ကို ရည်သန် တောင့်တလျက်၊ လှူဖွယ်ဖြစ်သော မိမိ၏သွေးနှင့် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် တို့ အပေါ်တွင် တွယ်တာခြင်းမရှိဘဲ မိမိ၏ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ လှူလိုစိတ်စေတနာနှင့် သဒ္ဓါတို့ကို အရင်းခံ၍ စိတ်ရွှင်ကြည်နူး စွာ ပေးလှူရာသည်။ မိမိ၏ ကုသိုလ်ကိုလည်း အများရရှိစေရန် ကုသိုလ်အမျှ ပေးဝေ ရာသည်။
ပြည့်လျှမ်းသောမေတ္တာ၊ ကရုဏာဖြင့် သွေးလှူရန် သွားနေသော ခြေလှမ်းများသည် ကုဋေတစ်သန်း မျှမက တန်ဖိုး ရှိလှပါသည်။ သွေးလှူဒါန်းမှုအောင်မြင်ပြီး၍ ပီတိ ဖြင့် စိတ်ရွှင် ကြည်နူး အားရ ပေါ့ပါးစွာ လှမ်းလာသော ခြေလှမ်းများသည် ကုဋေကုဋာမကပင် တန်ဖိုးမြင့်သွား ပါသည်။ သွေးလှူရှင်မှာ ဒါနဥပပါရမီ သံသရာရိက္ခာကောင်း များစွာ စုဆောင်းမိပါပြီ။ မြတ်စွာ ဘုရား အလောင်းတော် ဘ၀များစွာက လှူဒါန်းခဲ့သော သွေးတို့သည် မဟာ သမုဒ္ဒရာရေထက်ပင် များနေသေးသည်ဟု ဒေသနာတော် မှာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကဲ့သို့ တရား အားလျော်စွာ အကျိုးကြီးမားသည့် ဥပပါရမီမြောက် သွေးလှူခြင်း ဒါနမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ ဧကန်လှူဒါန်းသင့်ကြ ပါသတည်း။
သွေးသည်အသက်၊ သွေးသည်ဒါန၊ သင့်သွေးဖြင့် အသက်ကယ်ပါ။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ လောင်းလျာတုန်းက နောက်ဆုံးအထိပါရမီ၊
လူနတ်များစွာ ချမ်းသာရေးမို့ အသက်သွေးနဲ့ဖြည့်ခဲ့သည်။
သတ္တ၀ါတွေ သက်ရှည်ရေးတွက် အသက်သွေးကိုလှူပါမည်။
ဥပပါရမီ ကျင့်စဉ်မြတ်နဲ့ ကျေးဇူးဆပ်လို့ပူဇော်မည်။
နောက်မဆုတ်ပေါင် ခုလိုတွေးလို့ ကုသိုလ်ရေးမို့ကြိုးစားမည်။
ငပေါက်ဖော် says: အင်မတန် မွန်မြတ်တဲ့ အလှူပါ
ကံကောင်းလို့ ..သွေးသားကို လှူနိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာ မွေးလာတာပေါ့နော့်.
ဟိုးခေတ်အရင်ကဆို လှူချင်တိုင်း..လှူလို့ မရဘူး
ကျနော်တော့ တစ်ခါမှ မလှူဖူးပါဘူး..
အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ၊အဂ္ဂမဟာသသီရိသုဓမ၊ သီရိပျံချီ KING says: ကပေါက်ဖော်
(တလွဲမထင်နဲ့ သွေးထဲမှာ အယ်လ်ကိုဟော များနေတယ်ထင်လို့) …. :P
windtalker says: သွေးလှူတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ လို ရံဖန်ရံခါ အဝေရာ မှီဝဲတတ်သူတွေ အဖို့ တော့ သိပ်လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးဗျ ။ ဒါပေမယ့် အခု အေး.ကေကေ ရဲ့ စာကိုဖတ်ပြီးတော့ သွေးလှူရခြင်း ကုသိုလ်အကြောင်း ကို စုံနေအောင် သိသွားပါတယ် ဗျို့ 
Khin Latt says: အစ်မအေးရေ – ကျွန်မ အဖေက သွေး သိပ်လှူချင်တာ။
ဒါပေမဲ့ သွေးပေါင်မပြည့်လို့ ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ မလှူရဘူး။
အဖေ့ အစ်ကို ကတော့ အကြိမ် ၃၀ ကျော်ကိုလှူခဲ့တယ်။
ကျွန်မ ကတော့ လှူချင်ပေမဲ့ သွေးမြင်ရင်တောင် ရင်တုန် တာကြောင့် မလှူရဲပြန်ဘူး။
တကယ်တော့ ကိုယ့်ခန္တာထဲ က သွေး ကိုလှူရတာ တော်ရုံ သဒ္ဒါစိတ်နဲ့တော့ မရလောက်ဘူးနော်။
အစ်မရေ အခုတော့ မသိဘူး။ ဟိုးအရင်က သွေးလှူရင် ပေးတဲ့ ကြက်ဥ နဲ့ နွားနို့ ကို ခလေးတွေကို ကျွေးချင်လို့ ကိုယ့် သွေးကို လာလှူတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေလဲ ကျွန်မတို့ တိုင်း ပြည်မှာ ကြားဘူးတယ်။ :-(
aye.kk says: ငပေါက်ဖော်,..လှူချင်စိတ်လေးဖြစ်မိတာကိုဝမ်းသာမိပါတယ် ။
on duty (three days)၊နားရက်ရတယ်ဆိုပြီး အဲဒီစိတ်နဲ့သွားလှူတာရှိတယ်..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 327
yaungchikha says: အစ်မအေးရေ…….. ကျနော်လည်း သွေးလှူချင်ပါတယ်၊ ကျနော်သူငယ်ချင်းတွေကတော့ သွေးသွားလှူတယ်၊ ကျနော်လည်း လိုက်သွားဘူးပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်က သွေးပေါင်မပြည့်လို့ လှူလို့မရလို့ သူငယ်ချင်းသွားလှူရင် လိုက်ပို့ပေးတာလေးပဲ လုပ်ဖြစ်တယ်……
Moe Z says: အန်တီအေးကေကေရေ တစ်ခုလောက်ပြောပြချင်လို့ …
အဲဒီရက်နားနီးရင် တော်တော်စားရတယ် ပေါင် ၁၀၀မပြည့်ရင်လှူလို့မရဘူးဆိုလို့ အသက် ၄၀လောက်ရှိတဲ့ အမကြီးတစ်ယောက်ကလည်း နှစ်တိုင်းလှူတယ်
အဲဒီလိုစိတ်နဲ့လှူတဲ့သူလည်း ရှိတဲ့အကြောင်း အံ့သြစရာတွေ့မိလို့ပါ ….
aye.kk says: moe z,စိတ်ထားတတ်ကမြတ်ပြီး..
etone says: ကိုယ့်သွေးနဲ့ သူများ အသက်ကယ်ခြင်းဟာ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူဖြစ်ပေမယ့် အမြဲတမ်း သွေးအားနည်း ၊ သွေးပေါင်ကျတတ်တဲ့ ကျွန်မအတွက်ကတော့ အလှမ်းဝေးလွန်းလှပါတယ် … ။ သူများ အလှူကိုပဲ သာဓုခေါ်ပြီး မုဒိတ္တာပွားလိုက်ပါတော့တယ် … ။
aye.kk says: etone